Ity no charger MacBook vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ity no charger MacBook vaovao 12-inch
Peter Rhodes | | Apple, MacBook, About us
Roa andro izay no nanombohan'ny Apple ny fahagagana vaovao, solosaina maivana sy manify indrindra izay nantsoina indray MacBook ary inona no ampanantenainy ho fanombohan'ny vanim-potoana vaovao an'ny solosaina mamirapiratra amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo telegrama lehibe indrindra ampiasana.
Ity MacBook vaovao ity, araka ny efa nolazainay taminao tamina lahatsoratra hafa, dia misy fifandraisana roa. Eo amin'ny ilany ankavanana manana fidirana isika minijack ho an'ny feo sy amin'ny ilany havia, ho an'ny anjarany, ny seranan-tsambo USB-C vaovao. Vokatry ny fampiasana an'ity karazana seranan-tsambo vaovao ity, ny charger an'ity solosaina vaovao ity dia tsy mitovy amin'ny efa zatra hitantsika amin'ny mpampitohy MagSafe.
Hatramin'izao ary hatramin'ny naha-paty ny CEO Steve Jobs ary namidy ny hevitry ny mpampifandray MagSafe, ireo solosaina Apple taona maro lasa izay dia namidy niaraka tamin'ny tsindry hazo lena izay nampiasaina, Tsy toy ny mpanamboatra hafa, teknolojia manetrika ao amin'ny mpampitohy azy.
Ny charger MagSafe sy MagSafe 2 dia mpizara roa izay ny tariby mitondra tariby dia mifamatotra amin'ny vatany lehibe ary tsy azo sarahina. Ho fanampin'izany, ny mpampitohy famandrihana dia manana fananana andriamby izay mahatonga ny mpampitohy hipetraka eo ambonin'ny haingana mankany amin'ny toerana famandrihana ary "miraikitra" amin'ny andriamby amin'ny MacBook Pro Retina sy MacBook Air.
Tonga izao i Apple miaraka amin'ity MacBook vaovao vaovao ity, solosaina finday iray izay nohavaozina tanteraka ary, satria port USB-C iray ihany no misy azy amin'ny zava-drehetra, dia voatery nanala an'io hevitra io izay nahatonga ny famerenana ny solosaina finday Apple ho hafa.
Ankehitriny ny charger an'ity solosaina vaovao ity dia mitovy amin'ny an'ny iPad fa manana hery bebe kokoa. Miresaka charger tena mitovy amin'ny iray izay nozaraina tamin'ny iPod voalohany tamin'ny tariby Firewire izahay. Ao amin'ny vatan'ny charger dia manana fampiasa USB-C izahay hampifandray tariby famaranana karazana USB-C indroa.
Mampifandray ny faran'ny tariby amin'ny charger izahay ary ny iray amin'ny MacBook. Amin'ity dia tianay hampita anao fa amin'ity tranga ity, ny tariby izay miraikitra amin'ny charger, toy ny amin'ny iPhone sy ny iPad, dia tsy mivondrona aminy intsony ary azonao atao ny manova azy tsy mila manipy ny charger iray manontolo raha sendra tapaka fahatapahana tokana.
Ny zava-baovao iray hafa dia tsy toy ny charger izay entin'ny MacBook Pro Retina sy MacBook Air amin'izao fotoana izao, ireo charger vaovao ireo dia tsy ho tonga fenitra amin'ny tariby fanitarana mitovy amin'izany izay nampiasaina hialana amin'ny fampidirana ny charger amin'ny rindrina fa hamela azy eo ambony latabatra ary apetaho amin'ny tariby fanitarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » MacBook » Ity no charger MacBook vaovao 12-inch
Fandaharam-potoana fampiharana ho an'ny Apple Watch miaraka amin'i Xamarin
MacBook Rack, tetikasa mijoro eo amin'ny Kickstarter